Lix waxyaabood oo laga bartay kulankii maanta dhexmaray kooxaha Jeenyo iyo Gaadiidka ee horyaalka Soomaaliya – Gool FM
Jadon Sancho oo si maldahan kaga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Borussia Dortmund
“Kylian Mbappé iyo Neymar Jr waxay waligood joogi doonaan PSG” – Nasser Al-Khelaifi
RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta goolkii ugu quruxda badnaa xilli ciyaareedka oo la shaaciyay… (Bruno, De Bruyne mise Son?)
Jorge Mendes oo Cristiano Ronaldo u bandhigaya kooxo badan oo ay qeyb ka tahay Barcelona
“Qof walba ee ka shakisan awooda PSG waa inuu maankiisa badelaa” – Nasser Al-Khelaifi
Arsene Wenger oo go’aamiyay wararka la xiriirinaya kooxda Barcelona
Muxuu ka yiri Thomas Tuchel guushii soo laabashada aheyd ay ka gaareen kooxda Atalanta?
Kaddib dib u dhaca ku yimid heshiiska Jadon Sancho, Man United oo xiiso ka muujisay xiddig ka tirsan Real Madrid
Kooxda PSG ayaa 25-sano kaddib iska xaadirisay afar dhammaadka Champions League kaddib guul soo laabasho leh oo ay ka gaareen Atalanta
RASMI: Paul Pogba oo ku dhawaaqay Kooxdiisa cusub!!
Lix waxyaabood oo laga bartay kulankii maanta dhexmaray kooxaha Jeenyo iyo Gaadiidka ee horyaalka Soomaaliya
Haaruun November 20, 2016
(Muqdisho) 20 Nof 2016 – Kulan aad u xiiso badan ayaa galabta ka dhacay garoonka Banadir Stadium Ex Koonis ee Dagmada C/Casiis.
Ciyaartan ayaa ahayd midii labaad ee laga ciyaaro Horyaalka Dalkeenna Soomaaliya ee 2016/17, waxayna ciyaartan ku soo idlaatay barbaro 2-2 oo ay ku kala tageen kooxaha Jeenyo iyo Gaadiidka.
Haddaba halkaan hoose ka eeg waxyaabihii laga bartay kulankan:-
1- Daa’uud Cabdullaahi Tubaal ayaa maanta dhaliyay goolkiisii Saddexaad ee Taariikhda naadiga Jeenyo, horay waxa uu ugu gool uga soo dhaliyay kooxda Rajo iyo labo gool uu ka dhaliyey kooxdii galabta ee Gaadiidka.
2- Labo ciyaar saddex kaar cas (Roose) waa sheeko waali ah, galabta ayaa garsoore Bashiir Colaad labo roose uu bixiyay, halka kulankii furitaanka ee horyaalka dalka la dhiibay casaankii ugu horreeyay ee fasal ciyaareedkan.
3- Ciyaaryahan Sharkeey ayaa maanta sameyay rikoodh la yaab leh, kaddib markii 5 garab dhaaf (Offside) uu galay intii ciyaarta ay socotay galabta.
4- Kabtankii hore ee kooxda Jeenyo Axmed Tahliil ayaa iska dhaliyay Gool, waxaana uu noqday xiddigii ugu horreyay ee shabaqiisa dib ugu laabta xilli ciyaareedkan 2016/17.
5- Xiddiga dhawaan galka ah ee reer Nigeria Oliver Ogbonnaya Sunday ayaa galabta waxa uu kooxdiisa Gaadiidka ka caawiyay labo Gool, asagoo mid ka mid ah ku ansixiyey laad xor ah, halka goolkii uu iska dhaliyey Axmed Tahliil uu sababteyda lahaa gooldhaliyahani.
6- Bedelkii ugu dhaqsiyaha badnaa xilli ciyaareedkan cusub ayaa galabta laga sameeyay kulankii u dhaxeeyay kooxaha Gaadiidka iyo Jeenyo, waxaana bedelkaas uu ku dhacay gooldhaliyaha dhowaan galka ah ee Wacdi Qaasim, kaa oo ciyaarta qeybteedii hore bedel ku soo galay isagoo lagu badalay Xuseen Yuusuf Dabaaso, isla qeybtii dambe bilowgeediina la bedelay.
Haddaba ciyaartan waxaa garsoorayey Bashiir Colaad, calan wadaha koowaad wuxuu ahaa Saalax, calan hayaha labaad ayaana ahaa Aadan Ciid, halka sarkaalka afaraad uu ahaa Macallin Aadan.
GOOGOOSKA: AC Milan vs Inter Milan 2-2 (Inter oo iska soo qabatay qalkii guuldarrada)
Muxuu Internet-ku ka yiri Dabaaldeggii xalay ee Cristiano Ronaldo kulankii Atletico?